फिएट नयाँ 500 हे गुगल कार लाइनको साथ - स्मार्टमी
द्वारा प्रकाशित	 पाववे एम
इटालियन कार निर्माता फियाटले भर्खर टेक्नोलोजिकल विशाल गुगलको साथ सहयोगको घोषणा गरेको छ। यसको फल 500०० सवारी साधनहरूको विशेष लाइन हो हे Google 500, 500L र 500X मोडेल सहित।
टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले लामो समयदेखि कार निर्माताहरूलाई उनीहरूको समाधान प्रस्ताव गर्दै छन्। गुगलसँग फिएटको सहयोगका लागि धन्यबाद, ड्राइभरहरू सडकमा अमेरिकी कारका विशाल लोगोको साथ कारमा यात्रा गर्न सक्षम हुनेछन्। नयाँ श्रृंखलामा मोडेलहरू गुगल सहायक टेक्नोलोजीले सुसज्जित छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई टाढाका रूपमा सवारीसाधनसँग कुराकानी गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, कारहरू गूगल रंग योजना को सन्दर्भ मा धेरै शैलीगत तत्वहरु द्वारा छुट्याईनेछ। तिनीहरू देखिने छन्, अरूको बीचमा, बी-स्तम्भहरू र सिटहरूमा। हे Google प्रतीक फेन्डरमा राखिएको थियो।
रिमोट नियन्त्रण गुगल सहायक को लागी धन्यवाद
फिएट द्वारा फोटो
सबै कार्यक्षमताहरू गुगल सहायकसँग मोपर जडानको करीव एकीकरणका लागि धन्यवाद उपलब्ध छन्। लाइन वाहन मालिकहरू 500 हे Google आवाज मार्फत तिनीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ। सहायकले "Ok Google, My Fiat मा कुरा गर्नुहोस्" नारामा जवाफ दिनेछ। अनुप्रयोगले टाढै नै ढोका लक गर्दछ, जोखिम बत्तीहरू सक्रिय पार्छ र ट्रंक अनलक गर्दछ। कारबाट टाढा रहँदा पनि मालिकले ईन्धन स्तरको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछ, ढोका बन्द छ भन्ने पुष्टि प्राप्त गर्नेछ, टायरको चाप र ब्याट्री सर्त जाँच गर्नुहोस्। भर्खरको यात्राहरूको लागि डाटा पनि उपलब्ध छ - उदाहरणका लागि, कुनै खास दिन वा अन्तिम १०० सवारीमा दूरी यात्रा गरियो। यो सवारी साधन स्थान ट्र्याकि function समारोह र एक विस्तृत सूचना प्रणाली उल्लेख गर्न लायक पनि छ। फिएटले तपाईंलाई सूचित गर्दछ जब तपाईं गति सीमा नाघ्छ र जब तपाईं पहिले संकेत गरिएको क्षेत्र छोड्नुहुन्छ।
कारहरु पोल्याण्ड मा उपलब्ध हुनेछ
सीमित श्रृंखला फियाट 500 हे गुगल यो पोल्याण्ड, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, इटली, स्पेन र स्विजरल्याण्ड सहित १० यूरोपेली देशहरुमा प्रदान गरिने छ। नयाँ ग्राहकहरु Google नेस्ट हब स्मार्ट डिस्प्ले र एक महत्वपूर्ण केसको साथ क्यानभास ब्यागको साथ स्वागत प्याक प्राप्त गर्नेछन्।
गुगल सहायक फिटबिट वर्सा hit र सेन्स घडी हिट
गुगल सहायक, Fitbit
Fitbit वर्सा and र सेन्स वाच मालिकहरूका लागि राम्रो खबर! भर्खरको अपडेटको लागि धन्यबाद, तपाई अब आफ्नो घडीमा गुगल सहायक पाउनुहुनेछ। प्रमुख अपडेटसँग नम्बर .3.१ छ र फिटबिट भर्सा wat हेर्नुहोस् र ... को उद्देश्यले हो।
Amazon एलेक्सा, गुगल गृह, समाचार
आवाज सहायकहरूले भोमी भ्याकुम क्लीनरहरूसँग कुरा गर्नेछन्
16 नोभेम्बर 2020
गुगल सहायक, viomi
वीओमी स्याओमीको सब-ब्रान्ड हो जुन घरेलू उपकरणको उत्पादनमा माहिर छ (उनीहरूले भर्खरै एयर प्यूरिफायर र अपराइट भ्याकुम क्लिनर पनि जारी गरे)। यद्यपि यो रोबोट सफा गर्न राम्रोसँग परिचित छ। सम्भवत यस प्रकारका सबै उपयोगकर्ताहरू यस जानकारीको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ...
गुगलले शान्तपूर्वक गुगल होम हब र नेस्ट हबको इन्टरफेस पूर्ण रूपमा ताजा गर्यो
24 अक्टोबर 2020
गुगल सहायक, google home, गुगल होम हब
कुनै ठूलो घोषणाहरूको बिना, गुगलले यसको गुगल होम हब र नेस्ट हब स्मार्ट स्क्रीनमा ईन्टरफेस पूर्ण रूपमा रिफ्रेस गर्ने निर्णय गरेको छ। परिवर्तनहरू वास्तवमै ठूला छन् र धेरै धेरै परिचय गर्दछन्, र प्रीमियर आफै नै ... पहिले नै भएको छ! मेरो स्क्रिन ...
ड्राइभर मोडको साथ गुगल सहायक!
19 अक्टोबर 2020
गुगल सहायक, गुगल नक्शा
एक बर्ष प्रतिक्षा पछि, गुगल सहायक को महत्वपूर्ण सुविधा अन्त मा आयो। २०१ In मा, गुगलले सहयोगी बग्ने सुविधा प्रस्तुत गर्‍यो, जुन अन्ततः चयनित फोनहरूमा देखा पर्न थालिसकेको छ। यो केवल एक पायलट वा पहिले नै हो ...
गुगल गृह, समाचार, शाओमी होम
Xiaomi Mi स्मार्ट स्पीकर यूरोप जानुहुन्छ! [अपडेट - यो यहाँ छ!]
18 अक्टोबर 2020
गुगल सहायक, वक्ता, mi स्मार्ट वक्ता, Xiaomi
र यो एक सकारात्मक आश्चर्य हो। Xiaomi Mi स्मार्ट स्पीकर, बोर्ड मा Google सहायक संग पहिलो Xiaomi स्पिकर, पुरानो महादेश हिट गर्न को लागी! हामीले शाओमी मी स्मार्ट स्पीकरको बारेमा भारतमा यसको प्रीमियरको अवसरमा लेख्यौं ...
गुगल सहायकले तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरूसँग काम गर्दछ
10 अक्टोबर 2020
गुगल सहायक प्रयोग गर्ने सबै व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार। अमेरिकी विशालले उनलाई तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू खोल्न अनुमति दियो! यसले पूर्ण रूपमा नयाँ सम्भावनाहरू खोल्दछ। तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूको साथ एकीकरणलाई अनुमति दिनेछ, अन्यहरूमा तिनीहरूमा खोजी गर्न ...
शियाओमीले गुगल सहायकसँग स्पिकर जारी गर्‍यो। के परिवर्तन आउँदैछ?
3 अक्टोबर 2020
गुगल सहायक, mi स्मार्ट वक्ता, Xiaomi
शाओमी स्पिकरहरूको समस्या के हो? यदि तपाइँ चिनियाँ जान्नुहुन्छ भने कुनै पनि होइन। तर यदि तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्न भने, तपाईंसँग एक समस्या छ ... अहिलेसम्म, सबै सियाओमी स्पिकरहरूमा जिओआइ सहायक भित्र छ। अब यो परिवर्तनको समय हो। यो हप्ता भारतमा ...
एप्पल होमब्रिज, Apple HomeKit, FIBARO, गुगल गृह, गृह सहायक, IKEA होम स्मार्ट, समाचार, ओपनह्याब, शाओमी होम
युरोपेली संघले गुगल, एप्पल र अमेजन ईकोसिस्टममा अनुसन्धान आरम्भ गरिरहेको छ
Alexa, गुगल सहायक, google home, homekit, सिरी, यूरोपियन युनियन
एन्टिट्रस्ट अधिकारीहरूले सब भन्दा ठूला टेक्नोलोजी राक्षसहरूका बिरूद्ध अर्को अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। तिनीहरूको कार्य भनेको ईकोसिस्टमहरूले एकाधिकारवादी परिसर देखाउँदछ कि भनेर जाँच गर्नु हो। सम्पूर्ण कार्य EU प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्ग्रेट भेस्टेज द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ। उनी पक्का हुन चाहन्छि ...